DRC: Dib u eegista Saxaafadda Shiinaha Sabtiga 7 Sebtember 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: Dib u eegista Saxaafadda Shiinaha Sabtiga 7 Sebtember 2019 - Afrika
- Saxaafadda khadka tooska ah ee lagala tashaday saakay Kinshasa waxaa weli haysta awoodda maalgalinta dowladda Ilunga Ilunkamba. Saxaafaddu waxay sidoo kale muhiimad siineysaa madasha dhaqaalaha ee Makutano oo uu furay Madaxweynaha Jamhuuriyadda.
CAS-INFO.CA oo furaha kubbadda, cinwaanka: "Dawladda Ilunkamba ayaa maal-gelisay Golaha Qaranka ka dib markay qaadatay barnaamijkeeda". Dawladda Ilunkamba waxaa maalgaliyay Jimcihii "6 September" oo ay sameeyeen xubnihii qaran ee isbahaysiga FCC-CACH markii ay maqnaayeen wakiilo la soo xulay oo ka soo hor jeeday mucaaradka oo qaadacay ka qayb galka, ayaa ku wargalinaya boggan macluumaad. Isaga oo ka jawaabaya walaacyada wakiillada qaran, wuxuu sii wadaa CASINFO.CA, Sylvestre Ilunga wuxuu ballan qaaday in “barnaamijkiisa lagu shubi doono qorshe ficil isla maalgalinta xukuumaddiisa”.
Isla warbaahinta ayaa sheegtey, maqaal kale, shuruudaha ay soo saartay UDPS wasiirradeeda iyo cinwaankeeda: "Dowladda: UDPS" waxay ku soo rogtay "wasiirradeeda 70% iskaashiyadooda". Dhamaan wasiirrada ka socda UDPS waxay ku qanci doonaan qoondada xNUMX% marka laga hadlayo qaabka ay u shaqeeyaan shirkadaha, ayay tiri warbaahinta. Xubnaha kale waxaa soo jeedin doona xisbiga. CAS-INFO ayaa tilmaamaysa, iyagoo daliilinaya wareeg xisbi.
Dhiniciisa, Wakaaladda Wararka ee Kongo (ACP) waxay falanqeynta kulamada Madaxweynaha Jamhuuriyadda la leedahay martida Shirka Makutano Economic Forum iyo cinwaanka: "Felix-Antoine Tshisekedi waxay ku celcelisay dhiira gelinta dhigiisa Senegal Madaxweynaha Macky Sall." Amaahiyuhu wuxuu shaaca ka qaadayaa in madaxa dowladeed, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ay dhagaysi Jimcihii ka dhaceysay Palais de la Nation, Cheik Kanté, Wasiirka Senegal uu u gudbiyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda, isagoo mas'uul ka ah kormeerka. Qorshaha reer Senegal ayaa soo ifbaxaya, u imanaya inuu u gudbiyo isaga saaxiibtinimadiisa dhiggiisa Senegal, Macky Sall, isla mar ahaantaana u diro dhiirrigelintiisa ku aaddan dadaalkiisa ku saabsan ururka Kinshasa ee 5ème Forum Sultani Makutano.
Goobta wararka ee 7SUR7.CD, waxay ku badataa isla jihada iyada oo dib loo dhigayo wasiirka Senegal. Maanta, Kongo waxay ku tiirsan tahay Madaxweyne Tshisekedi fikradihiisa waaweyn. Dhawr sano gudahood, Kongo si adag ayaa loo lasaarayaa ”, waxaa laga aqrin karaa goobta.
Waxaa intaa dheer, CONGOPROFOND.NET wuxuu ku soo laabanayaa mowqifka Felix Tshisekdi ee ku saabsan kiiska "15 milyan USD" iyo cinwaanka: "Felix Tshisekedi wuxuu diidaa qaabka kormeerayaasha". Waa horumar soo afjaraya muranka ka dhashay kormeerka aan joogtada ahayn ee kormeerka guud ee Maaliyadda, ayay qortay warbaahinta. Isaga oo lahadlaya howl wadeenada dhaqaalaha ee wadaniga iyo kuwa caalamiga ah ayaa isugu soo baxay Pullman furitaankii Makutano Forum, Madaxa Dowlada Felix Antoine Tshisekedi ma uusan gaarin dhabarka malqacadaha, ayuu yiri CONGOPROFOND.NET.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u xaqiijiyo bulshada ganacsatada inaan bilaabay inaan qaato tababbarka tallaabooyinka si looga fogaado kadeedka nooc kasta ah, shirkadaha ay yihiin shayga ay u shaqeeyaan qaar ka mid ah adeegyada Gobolka. Waxaan shakhsi ahaan hubin doonaa in dhammaan wicitaannada aan rasmiga ahayn ee loogu yeero hawl wadeennada dhaqaalaha ay joogsan karaan oo keliya kuwa sharciga iyo tooska ah loo oggol yahay, "ayuu yiri Tshisekedi oo la hadlay warbaahinta.